Dawladda Qatar ay siiisay Dawladda FS lacag kaash oo dhan 200 Milyan oo Dollar – Balcad.com Teyteyleey
Dawladda Qatar ay siiisay Dawladda FS lacag kaash oo dhan 200 Milyan oo Dollar
Warar lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in Dawladda Qatar ay siiisay Dawladda FS lacag kaash oo dhan 200 Milyan oo Dollar.
Lacagtaasi ayaa loo siiyey Dawladda FS inaysan taageerin qorshaha Sacuudiga iyo Xulafadiisa ay kaga soo hor jeedaan Dawladda Qatar, waxaana lacataasi la sheegay inaysan ku dhicin Qasnada Dawladda FS balse lacagtaasi ay ku jirto gacanta Masuuliyiinta ugu sareysa Dawlada Somalia.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in lacagtaasi ay heshay Dawladda FS aan loo isticmaali doonin Mashaariic horumarin balse loo adeegsanayo Danaha u gaarka ah dowladda FS.
Dawladda Sacuudiga iyo UAE ayaa joojiyey Barnaamijyo Mashaariic Horumarineed ah oo laga fulin lahaa Somalia kadib markii ay Dawladda Somalia sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay Qilaafka ka aloosmay Bariga Dhexe, Mashaariicdaa ayaa la sheegay in ay ku bixi lahayd lacag ka badan midda ay Qatar sida kaash ah u siisay Madaxda Dawladda FS.
Arinka yaabka leh ayaa waxa uu yahay in Madaxda Dawladda FS ay ka door bideen Mashaariicdii horumarineed ee Sacuudiga ay fulin lahaayeen Somalia lacag Kaash oo ka heleen Qatar balse ay ku qabsanayaan danahooda Gaar ka ah.
Lacagtan ay sida tooska ah ay Dawladda Qatar u siisay Dawladda FS ayaa la xaqiijiyey in uu ka dambeeyey Agaasimaha Cusub ee Madaxtooyada Fahad Yaasiin oo xiriir dhaw la leh Qatar.
Go’aanka Dawladda Somalia ee u muuqda mid u janjeera dhinaca Qatar ayaa saameyn ku yeeshay Ganacsigii Somalidu ay la lahaayeen Sacuudiga iyo Imaartaadka.
Kalfadhiga Baarlamaanka oo dhawaan furmi raba Qodobada hor yaala ee looga hadlayo waxaa ka mid ah Go’aanka dawlada Somalia gaar ahaan heshiiska aan la ogayn waxa uu yahay ee ay kala saxiixdeen Somalia iyo Qatar, Lacagta Kaashka ah ee ay Dawladda Qatar siisay Somalia, wadadhadlkii dhex maray Dawlada Somalia iyo UAE iyo arimo kale Xasaasi ah oo ku saabsan isla qodobkan arimaha Carabta.
The post Dawladda Qatar ay siiisay Dawladda FS lacag kaash oo dhan 200 Milyan oo Dollar appeared first on Ilwareed Online.
RW Khayre “Waxaan rajaynayaa in farxadda ciiddu ay adkayso midnimada iyo walaaltinimada dadka Soomaaliyeed…”
Sideed askari oo ka tirsan ciidanka Jaad oo loo dilay ka dib dagaal dhexmaray kooxda Boko Xaraam